कम्युनिष्ट नेतामा टाईसुट मोह किन ? - कम्युनिष्ट नेतामा टाईसुट मोह किन ?
नेपालबहस संवाददाता २०७५,6फाल्गुन, 06:59:35 PM
“प्रचण्डसँग दुईदर्जन भन्दा बढी सुट छन्, तर दौरा सुरवाल एकजोर पनि छैन । टोपी जम्मा दुईटा छन्…….” सत्तारुढ ने.क.पा.भित्र माथिल्लो तहबाटै सुनिएको एउटा टिप्पणी । त्यस्तै हाल छ माओवादीमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी “माथिकै आदेशमा नयाँ शक्ति पार्टीमा सरुवा भएको” भनिएका पूर्वमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको पनि ।
तर उनले गाडीबारे गरेको यो निर्णय यति विवादास्पद र ढोंगी भयो कि नेकपा–माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले त भाषणमै भनिदिए, “बाबुरामले स्वदेशमा उत्पादित भनेर त्यो मुस्ताङ् गाडी चढेका होइनन्, गोल्छा अर्गनाइजेसनको विज्ञापन गरिदिएका हुन्, त्यसबापत उनले गोल्छा अर्गनाईजेशनबाट पैसै पाउँदा हुन् ।” नेपाली तानमा खाँडीका दौरा–सुरुवाल लगाउने कुरा बाबुरामले अस्वीकार गरिदिए । दौरा–सुरुवालमा सामन्तवादको गन्ध र झल्को आयो रे ! यस तर्कले त उनको सुटमा साम्राज्यवाद वा इसाई धर्मको गन्ध र झल्को आएपनि उनलाई उचित लागेको रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ ।
‘सर्वहारा नेता’ हरूलाई राष्ट्रिय पोशाक दौरा–सुरवालप्रति घृणा र टाईसुटप्रति मोह छ । इसाईकरणको एउटा आवरण स्वरुप त्यसका अनुयायीले टाईसुट लगाउनै पर्छ । दौरा सुरवालभित्र क्रिस्टियानिटी पस्न नसक्ने रहेछ । हेर्नुहोस न, हरेक हप्ताको शनिबार र आईतबार टोलैपिच्छे खुलेका क्रिश्चियनहरूका चर्चमा आउने–धाउने नवक्रिश्चियनहरू आफ्नो मालिक रिझाउन टाई–सृुटमा आउने गर्छन् । घरमा रङ्ग–रोगन लगाउने पेशा भएका सिन्धुलीतिरका एक कामदार ब्यागमा काम गर्दा लगाउने, रंगले मुछिएको लुगा बोकेर सुटेडबुटेड भई काममा जाने गर्छन् । एक दिन उनलाई निकै सोध्दा कुरा चुहाए, टाईसुट लगाए बापत उनलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ उनको चर्चले दिने गर्छ ।
पूर्वमाओवादीका नेताहरूले सत्तामा बस्दा पनि दौरा–सुरुवाल नलगाएर गाईजात्रे ताल पनि देखाईदिए । त्यो बेला प्रधानमन्त्री बाबुरामको निकटतम् मानिएका मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दौरा–सुरुवाल लगाउने भाषण गरेका थिए, कताबाट के खप्की आयो, त्यसपछि उनले दौरा–सुरुवाल लगाउने कुरा त के, त्यसको उच्चारण गर्न पनि छोडिदिए । चीनका प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ नेपालको तुफानी यात्रामा आउँदा प्रधानमन्त्री रहेका बाबुराम भट्टराईको लवाईलाई लिएर चर्को विवाद र गिल्ला भयो । ४८ जोर लुगा भएका भनिएका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि दौरा–सुरुवाललाई लत्याएर टाई–सुट लगाउने गरेकोलाई जनताले सहज दृष्टिले हेरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री भएपछि डा. भट्टराईले नेपालमै बनेको भनिएको ‘मुस्ताङ्–म्याक्स्’ गाडी चढ्ने भएपछि लागेको थियो, अब यिनले देशमै बुनेका खाँडीका दौरा–सुरुवाल लगाउने भए । तर उनले गाडीबारे गरेको यो निर्णय यति विवादास्पद र ढोंगी भयो कि नेकपा–माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले त भाषणमै भनिदिए, “बाबुरामले स्वदेशमा उत्पादित भनेर त्यो मुस्ताङ् गाडी चढेका होइनन्, गोल्छा अर्गनाइजेसनको विज्ञापन गरिदिएका हुन्, त्यसबापत उनले गोल्छा अर्गनाईजेशनबाट पैसै पाउँदा हुन् ।” नेपाली तानमा खाँडीका दौरा–सुरुवाल लगाउने कुरा बाबुरामले अस्वीकार गरिदिए । दौरा–सुरुवालमा सामन्तवादको गन्ध र झल्को आयो रे ! यस तर्कले त उनको सुटमा साम्राज्यवाद वा इसाई धर्मको गन्ध र झल्को आएपनि उनलाई उचित लागेको रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ ।
गोरखाको आफ्नो पैतृक घरमा बसेर बाबुको ८४ पुजा डा. भट्टराईले यसकारण गरेका रहेछन् कि उनका पिताले भनेछन्, “हामी बाचुन्जेल हाम्रो धर्मकर्मलाई बिथोल्ने कुरा नगर । तिमीहरू आफ्नो खुशी गर ।” त्यसैले उनले आमाको इच्छामुताबिक मनकामना दर्शन गराए । बाबुको चौरासी पूजा गरे । घरमा जमरा राखेर देवी पुजा गर्ने बाबुको हातबाट दशैँको टिका लगाएको देखाए ।
‘यो झलनाथको बीस हजार रुपैयाँ हालेको सुट छ, हामी उत्तर कोरिया गएर फर्किँदा हङ्कङ्मा किनेको……’ आफ्नो समुह पूर्वएमालेमा बिलय हुनुअघिसम्म स्व. नेता तुलसीलाल अमात्य यसो भन्दै भाषण, अन्तर्वार्ता, अन्तत्र्रिmयाहरू दिने गर्थे । झलनाथ लुगा लगाउँदा चिटिक्क मिलाएर लगाउने कम्युनिष्ट नेता त हुन्, तर तुलसीलालले भनेको कुुरा कहाँसम्म सत्य हो, त्यो उनैले जानेका थिए होलान् । पूर्वएमालेमै रहँदा आजका माले नेता सीपी मैनालीसँग एकपटक जनकपुरधाम जाने संयोग यस पंक्तिकारलाई मिलेथ्यो । उनी काठमाडौंमा छ तले घरका मालिक र सो घरमा धेरैवटा कुकुर पालेर बसेका कम्युनिष्ट नेता हुन् । जनकपुर जाँदा त उनले फाटेको लुँगी बोकेका रहेछन्, पंक्तिकारले सोध्यो, “एउटा लुँगी त्यही पनि फाटेको ? तपाईसँग नयाँ लुंगी किन्ने पैसा पनि छैन भन्यो भने कसले पत्याउला ?” उनको जवाफ थियो, “के गर्ने हामी सर्वहाराको राजनीति गर्नेले गरिबी प्रदर्शन गर्न जानेनौँ भने बिनसित्तिको विवादमा परिन्छ, झमेलामा फस्नुभन्दा यसै गर्नु वेश !”
त्यसको एक वर्षपछि तिनीहरूलाई कसले उचाल्यो कुन्नि, २०६८ भदौको शुरूमै तत्कालीन संविधानसभा–संसदमा मधेसी नेताहरूले यसको विरोधमा आगो बाले । माधव नेपालको क्याबिनेटमा बसिसकेका मधेसीहरूलाई उपेन्द्र यादबको फोरम (पार्टी) का नेता रेणु यादबले त “त्यो बेला तपाईहरू के हेरेर चुपचाप बस्नु भयो र यहाँ नाटक देखाउँदै हुनुहुन्छ ? तपाईहरूका यस्ता निर्लज्ज नाटक हेरिदिने यहाँ कोई दर्शक छैन…..” भनेर झपारेकी थिइन् । अर्का एक मधेसी सभासद्ले, “यह सब वातानुकुलित राजनीति करनेवाले तथाकथित मधेसी नेताओं ने मधेसी जनताको गुमराह कर रहे हैँ” पनि भने ।
माओवादीतिरका ने.क.पा. नेताहरू दौरा–सुरुवाललाई घृणा र हेयको दृष्टिले हेर्छन् र टाई–सुटको परिधानमा सर्वहाराको नेता हुन रुचाउँछन् । एमालेभित्रै पनि २०४६ को जनआन्दोलन सकिए लगत्तैको अवस्थामा दौरा–सुरवालप्रति कसैको रुचि देखिन्नथ्यो । जोड लगाउने एकमात्र नेता मनमोहन अधिकारी थिए । तर वर्तमान ने क पाका नेताहरू दौरा–सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोशाक नै मान्छन् । २०६७ साल भदौ ७ गते आजका मधेसी नेताहरूको पनि गहकिलो उपस्थिति रहेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालको क्याबिनेटले दौरा–सुरुवाल, कोट, टोपीलाई राष्ट्रिय पोशाक भनेर तोकेको थियो, जसलाई मधेसी नेताहरूले चाईचुई नगरी समर्थन गरेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि तिनीहरूलाई कसले उचाल्यो कुन्नि, २०६८ भदौको शुरूमै तत्कालीन संविधानसभा–संसदमा मधेसी नेताहरूले यसको विरोधमा आगो बाले । माधव नेपालको क्याबिनेटमा बसिसकेका मधेसीहरूलाई उपेन्द्र यादबको फोरम (पार्टी) का नेता रेणु यादबले त “त्यो बेला तपाईहरू के हेरेर चुपचाप बस्नु भयो र यहाँ नाटक देखाउँदै हुनुहुन्छ ? तपाईहरूका यस्ता निर्लज्ज नाटक हेरिदिने यहाँ कोई दर्शक छैन…..” भनेर झपारेकी थिइन् । अर्का एक मधेसी सभासद्ले, “यह सब वातानुकुलित राजनीति करनेवाले तथाकथित मधेसी नेताओं ने मधेसी जनताको गुमराह कर रहे हैँ” पनि भने ।
२०६८ भदौ ८ गते बिहिबारको बैठकबाट सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले रुलिङ् गरे, “हिमालदेखि मधेससम्म सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका पोशाक राष्ट्रिय पोशाक भएकोले यसबारे समयमै सम्बोधन गर्न म नेपाल सरकारलाई रूलिङ् गर्दछु ।” यसपछि राष्ट्रवादीहरूमा ठूलो खैलाबैला मच्चियो । ‘सौरभ’ले कान्तिपुर २०६८ असोज १ को अंकमा लेखे, “…..२०६३ को परिवर्तनको पूर्वसन्ध्यामा कान्तिपुर दैनिकमा एक लेखोट छापियो— मयलपोस सुरुवाललाई हुनसम्म होच्याएर सुटको वकालत गर्दै । लेखकको पहिचान थियो, दार्जिलिङ्बाट नेपाल छिरेको, तर सनातन धर्म त्यागिसकेको, गीतकार र संगीतकार पनि । यसबाट के बुझिन्छ भने मयलपोसका ठाउँमा सुट–टाईलाई नेपालको राष्ट्रिय पोसाक बनाउनमा कुनै एउटा धर्म र उसका अनुयायीहरू लागिपरेका छन् किनभने सुटसँगै अनिवार्य रुपमा जस्तो आउने टाई लगाइन्छ नै क्राइस्टलाई शूलीमा टाँगेको सम्झनामा । भलै तराईकेन्द्रित पार्टीका नेतृत्व वर्गले धोती–कुर्ताको पनि पहिचान हुनुपर्छ भनेर वा राई–लिम्बू मगर आदिले गादो र कछाडको वकालत गर्नुमा एउटा मौलिक निर्दोषपना अवश्य छ ।”
किनभने भारतमा दौरा–सुरुवाल पहिरन गोर्खाल्यान्ड राज्य प्राप्तीको आन्दोलनको प्रतीक भएर दिल्लीको सरकारलाई टाउको दुखाइरहेको छ भने यो टाउको दुखाई नेपालबाट मटियामेट गर्ने शपथग्रहण पनि यी दुईले गरेकै होलान् कि ? नेपाल राष्ट्रको पहिचान मेटाउने र राज्य विघटनको प्रक्रिया चलाउने ठेक्का यिनैले लिएको हो कि भन्ने देखाइरहेका छन् ।
‘सौरभ’ले कान्तिपुरको सोही लेखमा दौरा–सुरुवाल कति पुरानो हो भन्ने प्रसङ्गमा लेखेका छन्, “……बि.सं. १६८० तिर सिद्धिनरसिंह मल्लले एउटा रेखाचित्रमा तुना बाँधेको पोशाक पहिरेका छन् । अरू अनगिन्ती मल्लकालिन मूर्ति र प्रसंग छोडौँ । सन् १८०८ तिरको चिन्तामणि भट्टराईको लबेदाको प्रसङ्ग पनि छ, यद्यपि उनलाई १५७५ तिरको अर्थात मुकुन्दसेन प्रथमको समकालिन मान्नेहरू पनि छन् ।……हजारौँ वर्ष लगाएर एउटा पूर्ण शास्त्रीय विधान प्राप्त गरिसकेको पोसाकको, अज्ञानीहरूलाई अघि लगाई विरोध गराउनु सुनियोजित र दूरगामी षड्यन्त्रको भाग मात्र हो । जसले आफ्नो व्यक्तिगत शालिनता, गौरवशाली पारिवारिक परम्परा र सुसंस्कृत सामाजिक स्थानमा विश्वास गर्छ, उसले मयलपोस लगाउँछ नै । कसैलाई जंगल फर्किन मन लाग्छ भने उसलाई पनि उत्तिकै छुट छ ।”
भारतीय शासक र गुप्तचर निकायसमक्ष अनेक कबुलियतनामा गरेका प्रचण्ड र बाबुरामले दौरा–सुरुवाल नलगाउने कबुलियतनामा पनि गरेका छन् कि भन्ने आम आशंका हुनु स्वाभाविक हो । किनभने भारतमा दौरा–सुरुवाल पहिरन गोर्खाल्यान्ड राज्य प्राप्तीको आन्दोलनको प्रतीक भएर दिल्लीको सरकारलाई टाउको दुखाइरहेको छ भने यो टाउको दुखाई नेपालबाट मटियामेट गर्ने शपथग्रहण पनि यी दुईले गरेकै होलान् कि ? नेपाल राष्ट्रको पहिचान मेटाउने र राज्य विघटनको प्रक्रिया चलाउने ठेक्का यिनैले लिएको हो कि भन्ने देखाइरहेका छन् ।
लगाउने, खाने र जीवनशैलीका विषयमा पनि कम्युनिष्टहरू बाहिर पाखण्ड र भित्र बिलासिताको भोक बोकेका सबैलाई जित्ने भ्रष्ट आचरण भएका मानिस हुन् । पोशाकका मामिलामा पनि पूर्वमाओवादी दौरा–सुरुवाललाई लत्याएर टाई–सुटको औपनिवेशी इच्छाद्वारा ‘कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रवाद’ देखाइरहेको ठान्दो हो । तर यसले कम्युनिष्टहरूमा राष्ट्रवादी संस्कृति हुँदैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ ।
२०७५,6फाल्गुन, 06:59:35 PM